Home Wararka Maxaabiis ka tirsanaa Al Shabab oo ka baxsaday xabsi weyn ee ku...
Maxaabiis ka tirsanaa Al Shabab oo ka baxsaday xabsi weyn ee ku yaal Kenya
Dowladda Kenya ayaa sheegtay in Sarkaal ka tirsan Al shabab kuna xirnaa xabsi siweyn loo ilaaliyo dalkaasi Kenya iyo 2 kale ay baxsadeen. Sedexda qof ee ka baxsaday xabsiga sida weyn loo ilaaliyo ee dalka Kenya ayaa lagu kala magacaabay Mohamed Ali Abikar, Joseph Juma Odhiambo iyo Musharaf Abdalla.
Xabsigaan oo lagu magacaabo Kamiti waa mid siweyn loo waardiyeeyo waxaana lagu xiraa kuwa dambiyada waa weyn kagala wadanka Kenya. Mohamed ali abikar oo dadkii xabsiga kabaxsaday ayaa ku eedeysan Alshababnimo waxaana Booliska Kenya ay madaxiisi duldhigeen $535000 cidii Maclumaad soo xiristiisi horseeda keenta si lamid ah ragii xabsiga kala baxsaday.
Abikar ayaa la xukumay 2019 kii markii lagu helay inuu Al shabab ka tirsan yahay kuna lug lahaa werarkii ay ku dhinteen 148 Qof markii dagalamataal ka tirsan al shabab ay galeen Garissa University April 2015